Katidral Burgos, mma mara mma | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | Spain obodo, Ihe ị ga-ahụ
Ọ na-amasị m mgbe niile ụka gothic karịa nke ụdị ụkpụrụ ụlọ ndị ọzọ, ma ọ bụrụ na otu ihe ahụ emee gị, enwere ụka nke ị na-agaghị echefu: Katidral nke Santa María de Burgos, ke Spain.
Ọ bụ nnukwu ụlọ ụka mara mma nke na-ejide ọtụtụ ọdịbendị, nka na okpukpe. Ọ dị ọtụtụ oge otu narị afọ, nwere ọtụtụ akụkọ ntolite, nke ka na-agbanyeghị oge na nke na-akpọ gị òkù ka ị gaa ogologo njem site na ụlọ ekpere ya, ọnụ ụzọ ya, mmechi ya, ebe ịchụàjà na akụkụ ndị ọzọ mara mma.
1 Katidral Burgos
2 Gaa na katidral nke Burgos
3 Ihe ịga leta Katidral Burgos
Mgbe ụlọ nsọ dị ugbu a Ọ dị na ụdị ndị Gothic ma bido na narị afọ nke XNUMX Ọ bụghị nke mbụ a na-akpọlite ​​ebe a. N’agbata 1080 na 1095 e nwere katidral nke Romanesque bụ ebe ihe omume dị mkpa dị n’oge ahụ dị ka alụmdi na nwunye dị n'etiti Fernando III na Beatriz de Suavia, dabere na uru Burgos nwere n’oge ahụ dị ka isi obodo Castilian-Leonés Alaeze.
Ọ bụ kpọmkwem uru a na mkpa ọ dị na mgbasawanye na Europe ndị ọzọ, nke mere ka o doo anya na Burgos chọrọ ụlọ nsọ ka mkpa. Ọ bụ izizi nke katidral ugbu a, onye a na-etinye ntọala ya na July 1221. E si na France weta ndị nna ukwu na ndị na-atụpụta ụkpụrụ ụlọ maka na echiche mbụ bụ ime ihe yiri Katidral mara mma nke Notre Damme ma ọ bụ nke Reims.
Ya mere, n'ime afọ itoolu mbụ ọrụ ahụ gara nke ọma ọtụtụ na ka ọ na-erule n'afọ 1230 ka enyere òtù nzuzo ahụ aka nke a, na katidral gothic mbụ nke peninshula. Mgbe oghere ndị a, chevet, nave nke ụgbọ ahụ na ụlọ ụka ha dị iche iche na ukwe - apse, mechara, katidral Romanesque bibiri. Ọrụ ndị ahụ mechara soro na ya na 1260, temple doro nsọ kpam kpam.
Emechara owuwu nke katidral n’ime nanị afọ iri anọ bụ nnọọ ihe a rụzuru. Katidral ahụ, n’oge ahụ, nwere ike wuo ọtụtụ narị afọ ka nke dị na Burgos nwere uru ahụ. N'agbanyeghị nke ahụ, enwere ọtụtụ ọrụ ọhụụ ka emechara physiognomy nke ụlọ nsọ ugbu a abụghị nke ahụ. Mgbanwe kachasị dị mkpa mere na narị afọ nke XNUMX ma e nwere atọ: a gbanwere dome ahụ ma wuo ndị spiers na Chapel nke Constables.
Otu narị afọ mgbe e mesịrị, na Chapel of Relics na sacristy ọhụrụ, agbatịchara ihe ndị a. Ọ bụ ọtụtụ narị afọ nke katidral jupụtara n'ọrụ nkà, ọ bụ ezie na ọ nweghị usoro mweghachi dị ukwuu emere. Maka ọrụ ndị a, katidral nke Burgos aghaghị ichere ruo narị afọ nke XNUMX na nke XNUMX.
Mana n'ozuzu ya kedu ka katidral dị? Ọfọn ọ nwere Nhazi Latin nke 84 site na 59 mita na naves atọ: nke etiti nke otu mita iri na otu na mita 25 na nke ozo. Ọrụ nkà dị ebe niile: elekere nke nwere automaton, onye na-efe efe, nnukwu ihe ịchụ aja nke Renaissance a, ọmarịcha ili ndị eze, ndị egwu nwere ụlọ walnut dị oke ọnụ, akụkụ abụọ, otu baroque na nke ọzọ neoclassical, cloisters, na n'ezie, ọkwa ịrịgo ọla edo ama ama ọtụtụ ihe osise na nke ọ bụla uka ihe ọzọ iju ya anya.
Iche paragraf Achọrọ m ịkpọ aha ebe a ị ga-ahụkwa ili nke Cid na Doña Jimena. E bufere ha na ebe obibi ndị mọnk nke San Pedro de Cardeña na 1921 ma taa, ọ bụ ili dị mfe nke ejiri nnukwu marble kpuchie ya na ogwe osisi ndị gbara narị afọ XNUMX.
Gaa na katidral nke Burgos
Katidral nwere oge dị iche iche na oge ụfọdụ pụrụ iche:
Site na Machị 19 rue Ọktọba 31 ọ ga-emepe site na 9:30 nke ụtụtụ ruo 7:30 nke mgbede, na-emechi ụzọ na 6:30 pm.
Site na Nọvemba 1 rue Machị 18 ọ ga - emepe site na elekere iri nke ụtụtụ ruo elekere asaa nke mgbede ma mechie ọnụ ụzọ mbata na 10 elekere.
Oge pụrụ iche bụ ụbọchị ụfọdụ: Eprel 7, Disemba 8, 24 na 31 na Jenụwarị 1. Iji mara awa ndị a, ị ga-aga na weebụsaịtị nke katidral.
Katidral ahụ nwere nnabata n'efu na ehihie Tuesday site na 4:30 ruo 6:30 pm n'oge oyi site na 4:30 ruo 6 pm.
Ntinye nke ọ bụla na-efu euro 7, maka ihe karịrị euro 65s, 6, ụmụ akwụkwọ n'okpuru 28 na-akwụ euro 4, ụmụaka sitere na 50 ruo 7 na-akwụ euro 14 na otu ndị karịrị mmadụ 2 tiketi ahụ na-efu euro 15. Ndị pilgrim nwere nzere na-akwụ € 6, ndị nwere nkwarụ € 4 na ndị na-enweghị ọrụ € 50. Ọnụ tiketi onye ọ bụla gụnyere iji ntuziaka nke ihe eji eme ihe.
Ihe ịga leta Katidral Burgos
Enwere akụkụ ụfọdụ nke ụlọ nsọ ahụ mara ezigbo mma nke ị na-agaghị echefu. N'èzí ị nwere ike ịse foto ma nwee mmasị na mkpuchi dị iche iche malite na isi nke dị n'ihu Plaza de Santa María ma na-eme n'ụdị Gothic nke nwere ngalaba atọ, na-aga n'ihu na retrochoir na ọmarịcha alabaster ya nke Saint Paul na Saint Peter na ọtụtụ ụlọ ụka.
La Plọ nke Santa Tecla, nwa agbọghọ na-amaghị nwoke na onye nwụrụ n'ihi okwukwe na narị afọ nke XNUMX, bụ ihe dị mma, nwere ọtụtụ agba na ya, na-anọchite anya ndị mmụọ ozi na ndị nsọ. Na isi ihe nchụàjà Ọ bụ baroque, ọlaedo, nke ihe osise nke Santa Tecla na-ere ọkụ na osisi. Ọzọ na-akpali uka bụ Plọ ekpere nke echiche ma ọ bụ Santa Ana, ọrụ sitere na ọkara nke abụọ nke narị afọ nke XNUMX, nke okooko osisi Gothic nwere ọka na isi n'isi ebe niile.
La Plọ ụka nke ndị isi a na-akpọsa ya dị ka katidral dị na katidral ọzọ n’ihi na ọ bụ nke kacha mkpa ma maa mma n’ụlọ nsọ a niile. Ejiri ego Don Pedro Fernández de Velasco na nwunye ya, ndị Constable nke Castile wuru ya, nke ewepụtara taa na akpụrụ akpụ marble Carrara. E wuru ya na Chapel nke San Pedro na saịtị ma wuchaa ya na 1496. O nwere ugbaacha mara mma nke di ka kpakpando, ihe nile nke Gothic filigree, oru nke Simón de Colonia.
Uzo ozo di iche iche anya ka a na-akpo Akwa stair, nke dị na njedebe nke nave nke transept, na-ejikọ katidral ahụ na Calle de Fernán González site na ịgafe ọnụ ụzọ ámá Coronería na ịchekwa ndapụ nke mita asatọ n'oge ọ na-ewu ya. Steepụ bụ ọrụ Diego de Siloe ma wuchaa ya na 1523. O nwere usoro iri na itoolu ma chọọ ya mma nke ọma na zoomorphic na motiff osisi, isi nke ndị mmụọ ozi, ifuru na ahụhụ. Ọ mara mma nke ukwuu ma bụrụ onye a ma ama na Emere ya ka ọ bụrụ steepụ nke Paris Opera.
La ukpo ụlọ Obu ezigbo okwu, oru nke ndi okacha amara: oche iri ano ano na oche 44 na elu di elu, ndi ihe eji achọ ndu nke Kraist mma. Osisi bu ukpa ma grille si na 59. N’ikpe azu, egbula ile na Mgbanwe ya na ise oru nka, Isi sacristy, transept na dome, the isi ihe nchụàjà ma n'ezie, ndị Katidral Museum.
Eziokwu bụ na n'ọtụtụ ọrụ nka n'ime Katidral nke Burgos, ihe kachasị mma i nwere ike ime bụ ịnwe ndu ndu na aka, nke a gụnyere na tiketi tiketi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Spain obodo » Katidral Burgos, nke mara mma